एजेन्सी । चीनले अन्तरिक्षमा निर्माण गरेको आफ्नै नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रमा अन्तरिक्ष यात्रीहरू पठाउन रकेट तयार भएको जनाएको छ । यो रकेट अर्को साता अन्तरिक्षतर्फ पठाइने तयारी चीनले गरेको छ । चीनले पहिलो पटक तीन जना अन्तरिक्ष यात्रीलाई नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रमा पठाउँदैछ । उनीहरु तीन महिना अन्तरिक्षमा रहने छन् । उनीहरुले त्यहाँ रहँदा अन्तरिक्ष केन्द्र बाहिर हिँड्ने (स्पेस वाक), निर्माण र मर्मतका साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेछन् ।तियान्हे नाम दिइएको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रको मुख्य खण्ड गत अप्रिल २
सेतोपाटी3घण्टा पहिले
तेस्रो खेलमा स्पेन र पोल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुने
एजेन्सी। युरोकप फुटबलअन्तर्गत आज हुने तेस्रो खेलमा स्पेन र पोल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। स्टाडियो कार्टुजा रंगशाला स्पेनमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति १२:४५ बजेबाट सुरु हुनेछ। युरोकपमा यसअघिको पहिलो खेलमा स्पेनले स्विडेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। पोल्यान्ड स्लोभाकियाविरुद्ध २-१ ले पराजित भएको थियो।दुई टोली १० पटक एकअर्काविरुद्ध भिड्दा स्पेनले ८ पटक र १ पटक पोल्यान्डले जित्दा १ खेल बराबरीमा सकिएको छ।
तेस्रो खेलमा स्कटल्यान्ड र इङल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुने
एजेन्सी। युरोकप फुटबलअन्र्तगत आज हुने तेस्रो खेलमा इङल्यान्ड र स्कटल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वेम्बली रंगशाला इङल्यान्डमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ।युरोकपमा यसअघिको पहिलो खेलमा इङल्यान्डले क्रोयसीयालाई १–०ले पराजित गर्दा स्कटल्यान्ड चेक रिपब्लिकसँग २–०ले पराजित भएको थियो। दुई टोली हालसम्म ११४ पटक एकअर्काविरुद्ध भिड्दा इङल्यान्डले ४८ पटक र ४१पटक स्कटल्यान्डले जित्दा २५ खेल बराबरीमा सकिएको छ।
तियानमेन चोकको नरसंहार : अहिले पनि काँप्छन् मानिस
एजेन्सी। चीनको तियानमेन चोकमा आजभन्दा ठीक ३२ वर्षअघि निहत्था विद्यार्थीमाथि ट्यांक चलाइएको थियो। सैनिक ट्यांकले किचेर १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी मारिएका थिए। १९८९ जुन ४ मा ती विद्यार्थी चीनमा लोकतन्त्र बहालीका निम्ति एकत्रित भएका थिए। उक्त घटनाको रिर्पोटिङ वा शोधखोज गर्न अहिले पनि चीनमा प्रतिबन्ध छ। तियानमेन चोकमा लाखौं मानिस आन्दोलनमा सहभागी थिए, जसमा विद्यार्थीको संख्या अधिक थियो।
Dekhapadhi 30 दिन पहिले
एजेन्सी । चीनले अन्तरिक्ष यानबाट प्रक्षेपण गरेको जुरोङ रोभर मंगल ग्रहमा अवतरण भएको छ। यससँगै चीन मंगलग्रहमा सफलतापूर्वक रोभर अवतरण गराउने दोस्रो देश बनेको छ। ६ वटा पाङ्ग्रा भएको उक्तरो मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धमा अवतरण भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्‌। उक्त रोबोटमा क्यामेरा जडान गरिएको छ । रोभरको तौल २४० किलोग्राम रहेको र यसले […]
यो होला भनेर धेरैलाई सम्झेँ तर ठ्याक्कै चिन्न मलाई लामो समय लाग्यो। ओहो! मेरो प्रिन्सिपल सर फेसबुकमा स्याउ बेच्दै! बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल पो हो त, प्रिन्सिपलले जे बेचेपनि अंग्रेजीमै बेच्छ नि।
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलको बीचबाट बग्ने हान नदी अत्याधिक चिसोका कारण जमेको छ । दक्षिण कोरियामा यो वर्ष अत्याधिक चिसो महसुस गरिएसँगै राजधानी सिउल हुँदै बग्ने नदीमा बरफ जमेको हो । अहिले सिउल सहरको तापक्रम माइनस २० डिग्री सम्म पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । पछिल्ला २ वर्षमा पहिलोपटक उक्त नदी जमेको हो ।कोरियाली मौसम विभागका अनुसार मंगलबार अपरान्ह सिउलको तापक्रम माइनस १६ डिग्री रेकर्ड गरिएको छ । अत्याधिक चिसोका कारण सिउलको गेम्पो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसहित अन्य